तेस्रो दिन - उसको लोग्ने र बिरालो (उपन्यास) - RabinsXP Blog
आÏनो गालामा कसैको चिसो तर मीठो स्पर्श परेपछि नीलाका आ“खा उघ्रेका थिए । “रानी † उज्यालो भएको पनि निकै बेर भइसक्यो ।” गए रातिको बा“की नसालाई स“गाल्दै नीलाका गाला चुमेर आभासले भनेको थियो । नीलाले आभासलाई हेरी । आभासले नुहाई पनि सकेको प्रमाण उसका भिजेका केशहरूले दिइरहेका थिए । “मलाई अघि नै किन नउठाएको, आपूm मात्रै उठेर ¬” नीलाले मायालु पाराले आभासको गर्दनमा आÏना हातहरूको मालाकार पारेर झुन्डेको भाकामा टा“स्सि“दै भनेकी थिई । “तिम्रो त्यस्तो आनन्दको मस्त निद्रा भङ्ग गर्ने अपराध म गर्ने नै थिइन“ प्यारी † सरयुगकाकाले पठाएको फुच्चे केटो दुईपल्ट आइसक्यो । चिया ल्याउने खबर लिएर आएको त्यो केटो ड्ढेरि पनि आइपुग्ला भन्ने डरले मैले तिमीलाई उठाउने धृष्टता गरेको हु“ । प्यारी † मैले तिम्रो मीठो निद्रा विथोले“ ।” आभासले नीलालाई मायाको सागरमा डुबाउ“दै भनेको थियो । “आभास † जीवन कति रमाइलो रहेछ † यो पल यही“ रोकिए हुन्थ्यो≤ तिमीस“ग यसरी नै युगयुग बिताउन पाए हुन्थ्यो † तिमीले मलाई यस्तो जिन्दगी दिएर तिमीप्रति मलाई जन्मजन्मान्तरका लागि आभारी बनायौ । के तिमीलाई पनि मलाईजस्तै रमाइलो भएको छ ?” नीलाले आभासबाट पाएको अपरिमित आनन्द भोग्दै उसैलाई प्रश्न गरेकी थिई । “मलाई लाग्छ, तिमीले भन्दा मैले अझ बढी आनन्द प्राप्त गरिरहेको छु । तिमीले मेरो निरस जीवनमा रससञ्चार गरिदिएकी छौ । तिम्रो संसर्गबाट मलाई पनि अतुलनीय सुख प्राप्त भएको छ ।” आभासले पनि नीलाको अस्तित्वलाई हार्दिक रूपले स्वीकार गरेको सुनेपछि ऊ थप पुलकित भएकी थिई ।
त्यसपछि नीला नित्यकर्मबाट निवृत्त हु“दा नहु“दै सरयुगकाकाले पठाएको केटो चिया ल्याउने खबर लिएर गएको थियो । बगै“चामा राखिएका मेचटेबुलमा बिहानको सुखद समय बित्न लागेको थियो । उनीहरूले चिया पिउ“दापिउ“दै सरयुगकाका पनि त्यहा“ आएका थिए । “राजा † यसो आÏनो गाउ“तिरको हालखबर पनि लिइबक्सने हो कि ? किसानहरूलाई उनीहरूकै दैलोमा हजुरले हेरिदि“दा मात्रै पनि उनीहरू सारै रमाउ“छन् ।” सरयुगकाकाले गाउ“ घुम्ने प्रस्ताव राखेका थिए । “जाऔ“ न त काका, के भो र ? नीला तिमी पनि जाने हो ? हि“ड न, कस्तो रै’छ हाम्रो गाउ“ तिमी पनि हेर ।” आभासले नीलातिर ड्ढर्केर भनेको थियो । “एकैछिन है त ?” नीला उनीहरूस“ग अनुमति मागेर भित्र पसेकी थिई ।
केही हलुका ˘ाृङ्गार र सामान्य पोसाकमै नीला पनि आभासका साथमा त्यहा“बाट हि“डेकी थिई । झन्नै पन्ध्रबीसओटा जति झोपडी घरहरू भएका किसानहरूस“ग आभासले त्यस दिन भलाकुसारी ग¥यो । ती किसानहरूले आभासका खुट्टै ढोगु“लाजस्तो गरेको देख्दा नीलालाई कसोकसो नरमाइलो पनि लाग्न खोजेको थियो । यसो हेर्दा आभासका हजुरबा जस्ता उमेरका मानिसहरू पनि आभासस“ग नुहेको देख्दा नीलालाई संसारको भौतिक प्रबलताप्रति वितृष्णा हुन खोज्यो । कतिपय आइमाईहरूले नीलालाई पनि त्यसै गरेर उनीहरूस“ग धन नहुनुको निरीह सम्मान प्रकट गरेका थिए ।
“अब आजलाई यही“बाट ड्ढर्कौं सरयुगकाका । नीलालाई त्यत्तिको पैदल हि“ड्ने बानी पनि छैन । तिमी थाक्यौ होला नीला ? अब ड्ढर्कने ।” आभासले नीलाका दाया“ का“धमा उसको दाहिने हात राख्तै भनेको थियो । नीलाको सम्पूर्ण थकाइ उसको स्पर्शले हराउन खोज्दै थियो, तर लगत्तै उसले आÏनो हात हटायो । तिर्खाएको बेला भेटिएको पानी प्यास नमेटि“दै सुकेको अनुभूतिले नीलाले “किन हात हटाएको” भन्ने भावले आभासका अनुहारमा हेरेकी थिई । आभासले नीलाको असन्तुष्टि दृष्टिबोघ गरेर आÏना आ“खाले नै उनीहरूबीच सरयुगकाकाको उपस्थिति पनि भएको लक्ष्य गरेको थियो । त्यसबखत नीलालाई पनि सरयुगकाकाको उपस्थितिको प्रत्यक्षताले लज्जाबोध भएको थियो ।
“राजा † ऊ त्यो घर जसबहादुरको हो≤ त्यहा“सम्म पुगेर ड्ढर्कौं हु“दैन ?” सरयुगकाकाले उनीहरूभन्दा झन्नै बीस कदमजति पर भएको घरलाई लक्षित गर्दै भनेका थिए ।
“आहा † बिरालाका कस्ता राम्रा बच्चा रहेछन्, हेर त नीला †” एउटा मात्र माउ बिरालाका ओरिपरि घुम्दै गरेका तीनओटा छाउरा देखाउ“दै आभासले भनेको थियो । उनीहरूले जसबहादुरका आ“गनमा टेक्दा नटेक्दै आभासको दृष्टि बिरालामा परिसकेको थियो । सेतो र खैरो पाटा परेका घोर्ले
खालका बिरालाका बच्चाहरू हेर्दा सुन्दर पनि थिए । त्यसो त मसिना बच्चाहरू केका पो नराम्रा हुन्छन् र † “तिम्रो बिरालो हो जसबहादुर ?” आभासले आÏनाअघि उभिएको मानिसलाई सोधेको थियो । “हो राजा, मेरै घरपालुवा बिरालो हो । यो नभए त मुसाले टिक्नै दि“दैन् नि हजुर हामीलाई † छओटा पाएकी थिई, ढाडेले छाउरा बा“च्नै दि“दैन । बल्लतल्ल अहिलेसम्म तीनओटालाई जोगाउन सकेका छौ“ ।” जसबहादुरले निहुरिएर आÏनो चोरऔ“ला र बूढी औ“लाले एउटा छाउराको घा“टी मास्तिरको छालामा समातेर झुन्ड्यायो । “लौ न नि, के गरेको होला त्यस्तो, त्यो बच्चालाई †” त्यस्तो दृश्य जीवनमा पहिलोपल्ट देखेकी नीला चिच्याएकी नै थिई । उसका अनुहारमा पनि डरका रङहरू देखापरेका थिए । “ए लाटी, बिरालाको छाउरो बोक्ने असली तरिका नै त्यही हो । हेर त त्यसले कति सन्चो मानेको छ । माउले पनि तिनीहरूलाई त्यसरी नै बोक्छे ।” आभासले हा“सेर नीलाको डर हटाउन खोजेको थियो । आभासका कुरा सुनेर नीला केही आश्वस्त भएकी थिई तर कताकता उसको चित्तचाहि“ बुझिरहेको थिएन ।
“जसबहादुर † यो एउटा मलाई देऊ≤ म काठमाडौ“ लान्छु । अब त दूध खानसक्छ होइन यल्ले ।” आभासले जसबहादुरका हातमा भएको बिरालाको छाउरो आÏनो अ“जुलीमा थाप्दै भन्यो । आभासको अ“जुलीमा आएको बिरालो बिस्तारै “म्याउ“” ग¥यो । त्यसै बेला माउ बिरालो पनि आभासका खुट्टानेर आएर “म्याउ“ म्याउ“” गरिरह्यो । ठूलो बिरालाका पछिपछि साना बिरालाहरू पनि मसिनो स्वरमा “म्याउ“ म्याउ“” गर्दै थिए । आÏनो पारिवारिक विखण्डनको जानकारी पाइसकेका ती बबुराहरू त्यसरी एकोहोरो कराउनुबाहेक अरू के नै गर्न सक्थे र †
“यति सानो बच्चा, अलि ठूलो भएपछि लैजा“दा हु“दैन ?” नीलाले आमा बिरालोका काखबाट बच्चा बिरालो नखोस्ने भावले आभाससमक्ष मधुरो प्रतिकार गरेकी थिई । “तिमीलाई के थाहा नीला ? दूध मात्रै खान सक्यो भने भइहाल्छ । जति सानो छाउरो पाल्यो त्यति छिट्टो रत्तिन्छ । मैले मनमतीलाई योभन्दा सानामा पालेको थिए“ । यसले पनि भा“डामा खानसकेन भने दूधदानीमा खुवाउनुपर्ला ।” आभास अब बिरालाको छाउरो छोड्ने मनस्थितिमा छ“दै थिएन । “दुइटै लगिबक्सिए पनि भइहाल्छ नि राजा †” जसबहादुरले अर्को छाउरो पनि अघिकै ढा“चाले उचालेको थियो । “मलाई एउटा छाउरो भए पुग्छ । यो मैले बोकेको छाउरो नै हो हैन त सरयुगकाका ?” आभासले बिरालाको लिङ्ग ठहर गर्न सरयुगकाकास“ग पनि सहयोग मागेको थियो । “हो राजा, यो त छाउरै हो तर छाउरी पाल्नु राम्रो भन्छन् नि होइन र ?” सरयुगकाकाले बडो ध्यानपूर्वक बिरालाको अङ्ग नियालेपछि किटानी दिएका थिए । “कतै ढाडेको सङ्गत प¥यो भने ब्याउ“छन् र ब्याएपछि ड्ढेरि ढाडेबाट बच्चा जोगाउन अर्को टेन्सन । हेन्द्रीका एउटै बच्चा जोगिएनन्≤ चारबेत ब्याउ“दा पनि सोह्रैओटा बच्चा ढाडेले मा¥यो । त्यसपछि मैले छाउरी चाहि“ नपाल्ने निर्णय गरे“ । त्यसो भन्दाभन्दै पनि एउटी मनमती एकजनाले घरैमा ल्याइदिएकाले नपाली भएन । तर बिचरी त्यो ब्याउनुअघि नै परमधाम गई ।” आभासले आÏनो बिरालापालनको कथा नै सुनाएको थियो ।
“हजुरको विचार †” सरयुगकाकाको समर्पणभावको अभिव्यक्ति वातावरणमा गुन्जेको थियो भने जसबहादुर पूर्ण स्वामीभक्तिमा अर्पित थियो । हि“ड्ने बेलामा आभासले गोजीबाट केही रुपिया“ जसबहादुरका हातमा हालिदिएको थियो । रुपिया“ के कति थियो ? नीलाले देखिन तर सो रुपिया“ले जसबहादुरको अनुहारमा ल्याएको रौनक भने राम्रैस“ग देखिएको थियो । जब उनीहरू जसबहादुरका घरबाट ड्ढर्किएका थिए, त्यस बेला आभासको अनुहारमा पनि भिन्नै उज्यालोे देखिएको थियो । आभासको त्यस्तो उज्यालो अनुहार नीलाले यसअघि कहिल्यै देखेकी थिइन । त्यसबेला आभासको अ“गालोमा बिरालाको त्यही छाउरो टा“सिएको थियो । केही बेरसम्म छाउराले “म्याउ“म्याउ“” गरेर आÏनो वाध्यताको आवाज पनि निकालेको थियो । माउ बिरालाले पनि एकैछिन उनीहरूको पछि लागेर विरोधप्रदर्शन गरेको थियो, तर आÏना अरू दुई लालाबालाको रोदनपट्टि ध्यान दिनुपर्ने भएकाले माउ बिरालो नमीठो आवाजमा सायद रु“दै ड्ढर्केको थियो । यसरी एउटा बालकलाई उसकी आमाको काखबाट खोसेर ल्याउ“दा नीला पनि आपूm आमा जाति भएका कारणले हो या किन हो ? उसले आपूmभित्र नमीठो गरी दुखेको महसुस गरेकी थिई । नीलाले मन नपराएको दृष्टिले आभासलाई हेरेकी थिई, तर आभासले नीलाको दृष्टिलाई कुनै महइभ्व दिएको थिएन । यसबेला आभासका अनुहारमा अनौठोखाले ओज पोखिएको थियो ।
नीलाको दुखेको मनस“ग सरोकारै नराखी आभास झन्नैझन्नै विश्वविजयको अनुभूतिमा बिरालाको छाउरो बोकेर हि“डिरहेको थियो ।
“नीला, बाटामा यसलाई तिमीले काखमा बोकिदेऊ ल † त्यसो त यसका लागि एउटा पेरुङ्गोमा ड्ढोम ओछ्याएर तयार गरिएको छ, तर एक्लै यो आत्तिन्छ होला ?” मोटरमा चढ्ने बेलामा आभासले नीलालाई भनेको थियो । आपूmले स्टेयरिङ्ग सम्हाल्नुपर्ने भएकाले काखको बिरालो उसले नीलालाई थमाइदिएको थियो । एक त बिरालो, त्यसमा पनि यस्तो कलिलो छाउरो आÏनै काखमा आपूmले राख्नुपर्दा नीलालाई सिकसिको लागेजस्तो भएर जिरिङ्ग पनि भएको थियो । “आभासको खुसीका लागि बोकिदिन्छु ।” नीलाले मनमनमा यस्तै सोचेकी थिई ।
“पख है, एउटा ड्ढोटो खिचौ“” स्टेयरिङ्ग समातिसकेको आभास मोटरबाट तल ओर्लेर नीलाको र बिरालाको ड्ढोटो खिच्न तम्सेको थियो । नीलालाई बिरालोस“ग ड्ढोटो खिच्दा कस्तोकस्तो लागेको थियो, तर नीलाले “उसलाई मन पर्छ” भन्ठानी । सरयुगकाका र उनका परिवारस“ग बिदा भएर उनीहरू बाटो लागेका थिए । नारायणी नदीको छेउमा पुगेपछि आभासले मोटर रोक्यो । “नीला यो नदीको ब्याकग्राउन्ड पारेर यो बिरालाको र मेरो तस्बिर खिचन है †” आभासले भनेको थियो । त्यसपछि उनीहरू मोटरबाट तल ओर्लेका थिए ।
त्यहा“ आभासले बिरालोस“ग दुईतीन पोजको ड्ढोटो खिच्यो । त्यसरी ड्ढोटो खिचेका बेला आभासका अनुहारमा नीलाले एउटा अनौठो तृप्ति देखी । एक वर्षको घनिष्ठतामा आभासले नीलास“ग मुस्किलले दुईतीनओटा ड्ढोटो खिचेको थियो । बिरालालाई गालामै टा“सेर उभिएको आभासको ड्ढोटो त नखिचौ“जस्तो लागेको थियो नीलालाई, तर उसको खुसीको कुरा भनेर क्लिक गरिदिएकी थिई ।
“भन त नीला यसको नाम के राख्ने ?” मोटरतिर जा“दै गरेको आभासले नीलालाई नहेरी भनेको थियो । बिरालोलाई छातीमा टा“सेको उत्साहित आभास अघिअघिजस्तो र आÏना पाइलाहरू आड्ढै“लाई पनि भारी भएको अनुभूतिमा नीला पछिपछि मोटरसम्म पुगेका थिए ।
“यसको नाम मैले ठहर गरे“≤ आहा † तिमीलाई पनि मन पर्छ । ल भन त एकदमै सजिलो र एकदमै राम्रो नाम छ । ल क्लिउ पनि दिन्छु, यो नाम हामी दुईजनास“ग सम्बन्धित छ ।” आभासले नीलालाई बिरालो थमाइसकेपछि आपूm ड्राइभिङ्ग सीटमा बस्दै भनेको थियो । बिरालाको सिकसिकोले सताइएकी नीलालाई भने उसको उत्साहले भरिएको आवाजले पटक्कै स्पर्श गर्न सकेन । “नीलु, भन त मैले के नाम सोचे“ हु“ला यसको ?” आभासको रमाएको दृष्टि नीलाका काखमा भएको बिरालोमा थियो । “अब बिरालाको पनि किन नाम राख्नुपर्ने होला≤ राखे नै पनि जे राखे पनि भै गो नि † यसका लागि केको सल्लाह गरिरहनुपथ्र्यो र †” नीलाका मनमा यस्तै कुरा आएका थिए तर यसबेला आभासको खुसीमा सहभागी भइदिनु नै उसलाई उचित लाग्यो । “खोइ † मैले भन्न सकिन“” नीलालाई कुनै सङ्घर्षमा भागै नलिई पराजित भइदिन मनलाग्यो । “धत् लाटी † यत्ति पनि भन्न नसकेकी, म भन्दिऊ“ ?” बिरालामा गाडिएका उसका प्रेमिल दृष्टि एकैछिन नीलामा पनि परेका थिए, तर ती दृष्टि पुनः नीलाका काखमा नै ड्ढर्किए । “मिलन, यसको नाम मिलन≤ कस्तो लाग्यो ? तिम्रो र मेरो मिलनको प्रतीक †” आभासले आÏनो बाया“ हातले नीलालाई अ“गालो मारेर भनेको थियो । “राम्रो छ” नीलाले खुसी हु“दै भनेकी थिई । उसको अस्तित्वलाई पनि महइभ्व दिइएकाले होला † नीला यसबेला अप्रत्याशित खुसी भएकी थिई र आभासले एउटा हातले स्टेयरिङ्ग सम्हालेर अर्को हातले उसलाई अ“गालो हालेपछि पाएको उसको स्पर्शले धेरै बेरपछि नीलालाई आनन्द आएको थियो । “सा“च्चै राम्रो नाम राख्यौ तिमीले यसको, मिलन ।” नीलाले पहिलोचोटि आÏनै काखमा भएको बिरालोलाई मनपराउन चाहेर हेरेकी थिई ।
“आभास र मेरो मिलनको प्रतीक मिलन †” नीलाले मनमनै आभासले भनेको कुराको सत्यतालाई पहिल्याउन खोजेकी थिई । नीला अलमलिई, कताकता कसोकसो हराउन खोजी । यतिबेला आभासले राजमार्गमा मोटर गुडाइसकेको थियो ।
“आभास मोटर रोक रोक, यसले के ग¥यो कुन्नि † चिसो भयो भित्रसम्म ।” अचानक नीलाको झन्नै चिच्याएको झै“ आवाज सुनिएको थियो । एकसुरमा सुसेल्दै मोटर कुदाइरहेको आभासले पनि आत्तिएरै ब्रेकमा खुट्टा पु¥याएको थियो । निकै हतारिएर किनारा लगाउ“दै उसले मोटर रोकेको थियो ।
“के भयो नीला ?” आभास अझै पनि आत्तिएकै थियो । “म्याउ” बिरालो पनि डराएको थियो । “मिलन के भयो ?” आभासले बिरालो आपूmले लि“दै स्थितिको अध्ययन गर्न खोजेको थियो ।
आभासले बिरालो लैजानासाथ नीलाले आÏनो काखमा ध्यान दिएकी थिई । “लौन नि यसले त यही“ हगीमुती गरेछ । जम्मै मेरो जीउभरि । अब के गर्ने, छि छि †” नीला घिनले तमतमाएर कराएकी थिई । बिहाकै उपलक्ष्यमा आभासले किनिदिएको एकदमै दामी सारीमा मिलनले दिसापिसाब गरिदिएको थियो । “नीला † ब्यागमा ट्वाइलेटपेपर छ, पुछ र तुमलेटको पानीले हात धोऊ । अब दुई घण्टामा त घर पुगिहालिन्छ ।” पछिल्लो सीटमा भएको ब्यागतिर देखाएर आभासले शान्त आवाजमा भनेको थियो । “हो नि, ट्वाइलेटपेपरले पुछेर कसरी हुन्छ, आÏनो भित्रसमेत भिजेको छ । ओहो † कस्तो गन्हाएको ? तिमीले यो के रहर गरेको होला ? यस्तो थाहा पाएको भए म त मरे आउन्नथे“ ।” गनगनाउ“दै र ड्ढतड्ढताउ“दै नीलाले ब्यागबाट ट्वाइलेटपेपर झिकी ।
जति नै सड्ढा गर्दा पनि भित्रसम्म पसेको बिरालाको ड्ढोहोर निख«ेको थिएन । नीला त्यसै त बिरालाको सिकसिकोमा थिई, अब झनै घिनले दिगमिग लागेर वान्ता हुन खोजिरहेको थियो । एकदुईचोटि उसको भु“डी बटारिएर पनि आयो, तर बान्ता नै चाहि“ भइहालेको थिएन । त्यस घटनाका कारण राजमार्गको त्यो नागीमा उनीहरूको मोटर झन्नै आधाघन्टा जति रोकिएको थियो ।
“मिलनलाई पेरुङ्गोमा राखिदिऊ“ नीला †” निकै बेरसम्म नीलाको बाटो हेरेपछि अझै आशा मार्न नसकेको आभासले भनेको थियो । आभासको त्यो स्वरमा निरीहता पनि मिसिएको थियो । त्यसरी प्रत्यक्ष आÏनो भनाइ राख्ने आभासभित्र नीलाले मिलनलाई बोकिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना थियो । तर बिरालोले बिराएकाले आभास नीलालाई बिरालो पुनः बोकिदिने अनुरोध गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा थियो । आपूmले मोटर हा“क्नुपर्ने बाध्यताका कारण असहाय मिलनलाई आÏनो काखमा राख्न पनि आभास असमर्थ थियो । “नीलालाई मोटर हा“क्न आए पनि त” आभासले सम्झेको थियो । तर भरखरै मोटर हा“क्न सिक्न लागेकी नीलाले यो पहाडी बाटोमा मोटर हा“क्ने कुरै थिएन । पेरुङ्गोमा हाल्ने बेलासम्म पनि आभासले नीलाले बिरालो काखमा लिइदिन्छे कि भन्ने आश मार्न सकेको थिएन । नीलाले पछाडि ड्ढर्केर हेर्दा पनि हेरिन । नीला अब कुनै पनि हालतमा बिरालो काखमा बोक्ने पक्षमा थिइन । नीलाले आभासको बिरालोस“ग कुनै सरोकारै नराखी चूप लागेरै बसिरही । राजमार्ग भएर पनि सडक त्यत्ति राम्रो अवस्थामा थिएन । सडक लामो समयदेखि मर्मत नगरिएको अवस्थाको देखिन्थ्यो । त्यसैले सडकमा प्रशस्त खाल्डाखुल्डीहरू थिए । ज्यादै सावधानीपूर्वक मोटर हा“क्ता पनि पेरुङ्गो धेरै हल्लिरहेको हुन्थ्यो । अभ्यास नभएको कलिलो छाउरो कहिले यता र कहिले उता लड्दालड्दै आजित भइसकेको थियो । “मिलनलाई धेरै गाह्रो भयो≤ एकैछिन यसलाई बाहिरको हावा खुवाउनुप¥यो ।” मुगलिङ काटेर अघि बढेपछि एक ठाउ“मा आभासले मोटर रोकेको थियो ।
बिरालाको गुहुमुत परेकाले सबै शरीर गन्हाएर सकस परिरहेकी नीलाप्रति आभासले कुनै सहानुभूति व्यक्त गरेन । “नीला, कठै तिमीलाई बिरालाको गुहुमुतमा लपेसिनुपर्दा कति सिकसिको लाग्या होला ?” आभासले आÏनो अ“गालोमा उसलाई बा“धेर यसो भनिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षामा नीला थिई । तर मोटर रोक्नेबित्तिकै पेरुङ्गोबाट बिरालो झिकेर सुमसुम्याइरहेको आभासले नीलातिर हेर्दा पनि हेरेन । “हेरन † बिचरा मिलन, कति लखतरान भएछ । अब एकघण्टामा घर पुगिन्छ≤ यसलाई भोक पनि लाग्यो होला ?” सडक किनारको एउटा ढिस्कोमा बसेको आभासले बिरालोलाई काखमा राखेको थियो । डराएको भावमा बसेको बिरालाको ढाड आभासले दाहिने हातले मुसारिरहेको थियो ।
“नीला † तिमी कति भोकायौ होली, थाक्यौ पनि होली † अब हामी चा“डै घर पुग्छौ“ प्यारी †” नीलाको कल्पनाको संसारमा नीलालाई अ“गालामा बा“धेर आभासले यसरी भनेको थियो, तर वास्तविकताको संसार भने नीलाका लागि अप्रिय थियो ।
“मिलनलाई पेरुङ्गोमा धेरै अप्ठ्यारो भएजस्तो छ ।” आभासले नीलालाई सुनाउ“दै भनेको थियो । नीलाले आभासको कुरा सुने पनि नसुनेजस्तो गरेर बेवास्तामा उसले अर्कैतिर आÏनो ध्यान भएजस्तो गरिरही । त्यसपछि आभासले पनि त्यो कुरा दोहो¥याएको थिएन ।
अघिजस्तै आभासले बिरालो पेरुङ्गोमा हालेर पछिल्लो सीटमा राखेको थियो । उनीहरू पनि पहिलेजस्तै गरी अर्थात् आभास ड्राइभिङ्ग सीटमा र नीला उसस“गैको सीटमा बसेकी थिई । त्यसपछि उनीहरूबीच कुनै कुराकानी पनि भएन । नीला मनभित्र नरमाइलोपनको भारी बोकेर यात्रामा सामेल थिई । हिजोको यही यात्रा सम्झ“दा हिजो सपना थियो वा आज सपना हो जस्तो उसलाई लागिरहेको थियो । आभास पनि सधै“ झै“ शान्त तर अनुहारमा असन्तुष्टिका भावहरू बोकेर मोटर कुदाइरहेको थियो ।
यो यात्रा बा“की एक घण्टाको भनेर आभासले घोषणा गरेको थियो । मनको बोझ र नरमाइलोपनले गा“जेर हो कि किन हो † नीलालाई भने यो एकघण्टा अति लामो र पट्यारलाग्दो लागेको थियो ।
नीलाको आभासस“गको संसर्गमा बितेका यत्तिका दिनहरूमध्ये आजै यस्तो अप्रिय समय बितेको थियो । यसअघि आभासस“ग हु“दा उसको कुनै पनि समय थाहै नपाई बित्ने गथ्र्यो । तर आज भने यही समय उसका लागि पत्याउनै नसकिने गरी लामो भएको थियो ।
“शेरबहादुर, चा“डो छिटो गरेर मिलनका लागि दूध लिएर आइज ।” घरमा पुगेपछि मोटरबाट ओर्लनासाथ आभास कराएको थियो । “निकै सानो रहेछ हजुर, कचौरामा ल्याउने कि बोतलबाट खुवाउने हो ?” शेरबहादुरले पेरुङ्गोमा राखिएको बिरालोलाई हेर्दै भनेको थियो । “पहिले कचौरामा ल्याइहाल≤ खाएन भने बोतलमा खुवाउ“ला ।” आभासले पेरुङ्गोबाट बिरालो झिक्तै भनेको थियो ।
“नीला † तिमी चा“डै नुहाइधुवाइ गर अनि हामी स“गै बसेर चिया खाने ।” उसस“ग आभासले भन्दै नभनेका कुराहरू नीलाका कानसम्म आएका थिए । आभास बिरालो बोकेर अघिअघि लागेको थियो भने नीला कताकता अपमानको अनुभूतिमा रुमल्लि“दै उसको पछिपछि लागेकी थिई ।
बिरालाको गुहुमुतको सिकसिकोले र यात्राको थकाइले लखतरान नीला नुहाइधुवाइ सकेर बाहिर निस्क“दा पनि आभास बिरालाकै व्यवस्थामा नोकरहरूस“ग व्यस्त देखिन्थ्यो । उनीहरूको कोठाको रूप पनि ड्ढेरिएको थियो । एउटा सानो झोलुङ्गोखाले पलङ उनीहरूको कोठाको किनारमा राखिएको थियो । उनीहरूको सुत्ने पलङको शिरलाई पनि उल्टोपट्टि ड्ढर्काइएको थियो । अर्थात् उनीहरूको पलङको सिरानीमा टाउको राखेर सुत्ने मानिसले त्यहा“बाट नउठीकन नै त्यो सानो झोलुङ्गोखाले पलङलाई राम्ररी हेर्न सक्थ्यो । “अब बिरालाको तस्बिरका साथै बिरालाको पलङ्ग पनि हेर्नुपर्ने भयो ।” नीलाले मनमनै सोचेकी थिई ।
“ए तिमीले त नुहाई पनि सकिछौ † दलबहादुर दाइ, रानीसाहेबलाई चिया बनाएर त्याऊ । अ“ऽऽऽ मलाई पनि ल्याइदेऊ न, म ननुहाई खान्छु एककप चिया ।” आभासले अह्राएको थियो । दलबहादुर तुरुन्तै आदेशको पालना गर्न त्यहा“बाट हि“डेको थियो । “हेर न नीला † मिलन लामो यात्राले होला, कस्तो लल्याकलुलुक भएको छ । एकचोटि डा. दत्तलाई ड्ढोन गर्नुप¥यो ।” आभासले पलङमा सुतिरहेको बिरालोलाई लक्षित गर्दै नीलास“ग लामो समयपछि केही नजिक भएर कुरा गरेको थियो । त्यसपछि ऊ लगत्तै ड्ढोनमा डा. दत्तस“ग कुरा गर्न लागेको थियो ।
उनीहरूले चिया पिइसक्ता नसक्तै डाक्टर दत्त आएका थिए । पशुडाक्टर दत्तले बिरालाको राम्ररी परीक्षण गरिसकेपछि डा. दत्तलाई लिएर आभास बैठककोठामा गएको थियो । त्यसपछि झन्नै एकघण्टासम्म डाक्टर दत्तस“ग आभासले कुराकानी गरेको थियो । चियाचमेना गराएर आभासले डाक्टर दत्तलाई बिदा गर्दा रात्रिको प्रथम प्रहर बित्न लागेको थियो । “रानीसाहेबले भुजा ज्यूनार गरिबक्सेन, हजुरलाई पर्खिबक्सेको छ ।” दलबहादुर दाइले आभासलाई बेलुकीको भोजनको निम्तो गरेको थियो । “ओहो † मैले त नुहाएकै छैन, दलबहादुर दाइ † त्यतिन्जेल मिलनका लागि दूध ठीक पार त । त्यो मनमतीको दराज छ नि, हो त्यसमा दूधको बोतल पनि छ, त्यसलाई माझेर दूध ल्याऊ है †” आभासले हतारहतारमा भनेको थियो । त्यसपछि झन्नै दौड“दैजसो ऊ नुहाउने कार्यमा जुटेको थियो ।
उनीहरू खानाखाने टेबुलमा पुग्दा रात धेरै बितिसकेको थियो । नीलालाई भोकले धेरै थिचेकाले गर्दा खाना खाने रुचि नै हराएजस्तो भएको थियो । “तिमीले अघि नै खाएकी भए पनि हुन्थ्यो नि नीला †” आभासले दिएको सल्लाहको नीलाले कुनै जवाड्ढ दिन चाहिन ।
दलबहादुर दाइको सुरुचिपूर्ण परिकारले पनि नीलालाई त्यसबेला तृप्ति दिन सकेन । पेट भोकै भएर पनि नीलाको मुख भने अघाएको थियो । आभासले चाहि“ सदाझै“ आÏनो सामान्य खानपिन गरेको थियो । तर नीलालाई “आज किन थोरै खाएकी ?” भन्नु त परै जाओस् उसको थालतिर पनि उसले हेर्दै हेरेन । खानाखाने टेबुलबाट उठेर आभास आÏना कोठातिर लागेको थियो≤ नीला उसका पछिपछि ।
“बुझ्यौ नीला, मिलनलाई ज्वरो आएजस्तो छ । यी डाक्टरहरूलाई के गर्नु ? अघिमात्र जा“चेर ठीक छ भनेर गएको दत्ते, म ड्ढोन गरेर सोध्छु एकपटक ।” बिरालाको पलङमा पुगेर बिरालो सुमसुम्याउ“दै आभासले भनेको थियो । त्यसपछि ऊ ड्ढोन गर्न लाग्यो । नीला आÏनो बिछ्यौनामा पुगेर ढल्केकी थिई ।
हुन पनि आज ज्यादै थाकेकी थिई नीला । यात्राले भनौ“ भने आजको यात्रा त्यस्तो खास जटिल पनि होइन । कच्ची सडकमा दुईतीन दिनको यात्रा पनि उसले गरेकी छ । राजमार्गमा धेरैजसो सलल बगेको गाडीमा आज खास दुःख भएको थिएन, तर पनि उसले अचाक्ली थाकेको महसुस गरिरहेकी थिई । त्यसैले नीलाले चुपचाप निदाउने अभिप्रायले आ“खा चिम्लेकी थिई≤ निद्रा तर उसका नजिक आउन चाहेको थिएन । आ“खा चिम्लेर थकाइ मेटाउने प्रयत्नमा ऊ लागिरही ।
डाक्टर दत्तले ड्ढोनबाटै कुनै औषधीको नाम लेखाएर छुटकारा पाउन खोजेका थिए, तर आभासले औषधी लिई आउन र एकपटक मिलनको पुनः जा“च गर्न आग्रह गरेको थियो । जसले गर्दा आधारातमा पनि औषधी बोकेर डाक्टर दत्त उनीहरूको शयनकक्षमा प्रवेश गरेका थिए । परपुरुष शयनकक्षमा प्रवेश गर्नु, त्यो पनि आपूm सुतिरहेको बेला, नीलाले सरमको अनुभूतिलाई निदाएको नाटकले छोपिदिई । कालो थसुल्ले तर फुर्तिलो डाक्टरले आभासका आ“खा छलेर यसो एकदुई पटक निदाएको भन्ठानिएकी नीलातिर पनि हेरेको थियो ।
“यो औषधीले यसलाई ड्ढाइदा भइहाल्छ । राजा † अब सुतिबक्से हुन्छ≤ हजुरले चिन्ता गर्नुपर्दैन । बिरालो पनि औषधीको प्रभावले अब बिहान मात्रै उठ्छ ।” बिरालोलाई सुई घोचिसकेपछि दत्तले आभासलाई आश्वस्त पार्न खोजेको थियो । त्यसपछि डाक्टर दत्त बिदा हुन खोजेको थियो, तर आभासले केहीबेर अलमल्याएर बैठक कोठामा दुवै गड्ढ गरेर बसेका थिए । झन्नै आधाघण्टा जति पछि पुनः डाक्टर दत्तलाई लिएर आभास कोठामा आएको थियो । “मैले भने नि राजा, अब यो निदाएको छ । हजुर पनि सुकला भए हुन्छ ।” डा.दत्तले बिरालोलाई स्टेथेस्कोपले जा“च्दै भनेका थिए ।
आभास बिछ्यौनामा आउ“दा बिहान हुनका लागि केही घण्टामात्र बा“की थियो । नीला पनि रातैभरि निदाउन सकेकी थिइन । यस्तो नौलो परिवेशमा निदाउनुको अनुभूति नीलाका लागि ज्यादै अनौठो र अप्रियसमेत भएको थियो । उसलाई जीवनमा पहिलोपल्ट सडकमै सुतेजस्तो लागेको थियो । त्यस रात नीला पनि निदाएकी थिइन भन्ने कुरा आभासलाई भने थाहा भएन । आभास बिछ्यौनामा ढल्किनासाथ निदाएको थियो । दिनभरिको थकाइले पिरोलिएको आभासको स्वाभाविक निद्रा स्वीकार गर्दै नीला भने बिउ“झै पल्टिरही । असहज अनुभूतिले मर्माहत उसका आ“खामा भने निद्रा आउनै सकेन ।
बिहानीपख शौचालय जाने क्रममा नीलाले आÏना अप्रिय दृष्टिहरू बिरालाका पलङमा नचाह“दा नचाह“दै पनि पारेकी थिई ।
जिब्रो मुखबाट अलिकति बाहिर निकालेको बिरालो लामोलामो सास ड्ढेरेर निदाएको थियो । जीर्णशीर्ण त्यो बबुराको सानो शरीरको भु“डीको भाग एकदमै छिटोछिटो बाहिरभित्र गरिरहेको थियो । “यो त मर्छ जस्तो छ, आभासलाई उठाइदिनुप¥यो” नीला पिसाब गर्न नगएर आभासलाई जगाउन बिछ्यौनातिर गई । तर मस्त निद्रामा भएको आभासको निद्रा बिथोल्न पनि उसले सकिन । जे होस्≤ ऊ पिसाब गरेर आई र पुनः बिछ्यौनामा ढल्की ।
नीलालाई निद्रा लागेजस्तो भएर आएको थियो र ऊ निदाई पनि ।
Next story पाचौ दिन – उसको लोग्ने र बिरालो (उपन्यास)
Previous story दोस्रो दिन – उसको लोग्ने र बिरालो (उपन्यास)
RefiNow: Making it Easier to Refinance
FITNESS ACCESSORIES AND TECH: THE LATEST IN BLUETOOTH SUNGLASSES
Honor 50, 50 SE, 50 Pro: Rumors, Specs, Features, Launch
The wallet can now be integrated into your business for free
The Best Way To Earn Money In Nepal (Online)